Ireo tarika teknika mpamorona sy mpikarakara ao amin’y orinasa Solar Ship
Ny Tale jeneraly: Jay GODSALL
Izy no tale mpamorona ny orinasa Solar Ship. Izy no mamaritra sy mitantana ny paik’ady rehetra ao amin’ny orinasa nabomboka tamin’ny taona 2006. Izy koa no namorona ny orinasa FIO izay misahana manokana ny Biotechnologie izaymishana manokana ny fitiliana sy fanarah-maso ireo areti-mifindra.
Nahavory vola $25 M izy ho fanombohana io tetik’asa io rehefa nahatsangana ny birao mpanatanteraka.
Ny Tale ara tecknolojia: John HUTCHINSON
Manana traik’efa mihoatra ny 30 taona teo amin’ny fanamboarana sy fikojakojana fiara manidina tany amin’ny tany saro-dalana ny lehilahy, ary voasokajy ho mpamaky lay amin’ny famoronana sy ny fivarotana ireo vokatry ny angovo azo havaozina ho an’ny tany andalam-pandrosoana. Amin’ny maha tale ara teknolojia ny orinasa Freeplay Energy, izay manana ny maha izy azy ao amin’ny bourse de Londres, dia i John no tompon’andraikitra voalohany amin’izay rehetra mahakasika ny resaka teknika, ny dessins industriels ary ny fikarakarana ireo fitaovana rehetra.
Manana ny mari-pahaizana MBA sy licence en droit avy ao amin’ny Oniversiten’ny Cape Town Afrika Atsimo izy.
Ny Talen’ny fampandehanan-draharaha: Michel RUGEMA
Mananatraik’efa mihoatra ny 20 taona amin’ny fampandehanan-draharaha I Michel RUGEMA, indrindra fa ny fampandehanan-draharaha ho an’ireo tany mihotakotaka. Efa nitantana tetik’asa maro tao amin’ny USAID sy UNICEF Tany Afrika sy Haiti koa izy, ary efa mpitantana toeram-pisakafoana tao New York. Izy no namorona no sady tale mpitantana ilay orinasa “Archipel” izay mpandrindra sy mpanorohevitra mikasika ny fitantanana hotely (Société de gestion et consultance en gestion hôtelière et restauration).
Manana ny Maitrise en gestion hôtelière de l’université de Cornell (USA) sy BSC de l’Université de Montréal koa izy.
Ny talen’ny fikarohana sy famoronana: Dr. Sébastien FOURNIER
Izy no miandraikitra ny tetik’asa fikarohana sy fanapariahana ny vokatra avy ato amin’ny orinasa Solar Ship ka mikendry indrindra ny fanamaivanana ny sandan’ny tetik’asa sy ireo mety ho fatiantoka eo amin’ny lafiny ara-barotra. Nitana ny andraikitry ny talen’ny ara teknolijia tao amin’ny tetik’asa FIO izy, ary namorona sy nanapariaka ilay fomba iray izay azo ampiasaina amin’ireo fitaovana azo entina mandehandeha ahafahana mitily ireo aretina mifindra. Noho ny traikefa nananany teo amin’ny sehatra indostrialy maneran-tany dia nahavita nanaparitaka seha-pahalalana mivelatra be izy, izay mahakasika ny simia madinika (chimie fine) sy ireo siansa mahasahana ireo akora azo volavolaina (science des matériaux plastiques) ary ny teknolojia ampihaharina amin’ny zava-manan’aina (biotechnologie). Manana ny doctorat amin’ny simia avy ao amin’ny oniversiten’i Toronto, izay miompana manokana amin’ny technolojia madinika indrindra ( specialisation en nanotechnologie) ny Dr. Sébastien FOURNIER.